काम गर्ने हनुमान पगडी गुथ्ने ढेंडु – Ankush Daily
काम गर्ने हनुमान पगडी गुथ्ने ढेंडु
अहिले वीरगंजमा मेयर बिजय कुमार सरावगीको चर्चा चुलिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा कुनै उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको भएतापनि अरुले गरेको कामको श्रेय आफुले आफैलाई दिएर आफ्नो पिठ्यु आफै थप्थपाउने कार्यले गर्दा हामी र हाम्रो संस्कृति अब बांकी रहन्छ कि रहदैन त्यो चिन्ता बढेर गएको छ । मेयर बिजय कुमार सरावगी मेयर हुनुभन्दा अगाडी एउटा सम्पन्न व्यवसायी हुन् । उनको दैलोमा समस्या लिएर जाने मान्छेहरुलाई उनले सक्दो सहयोग नै गरेको रेकर्ड भेटिन्छ तर अहिले उनी र उनको भजन मण्डलीले आफुले गर्दै नगरेको मोतियाबिन्दुको अप्रेशन शिविरबारेमा आम नागरिकहरु बीच भ्रम छर्ने काम गरेको देख्दा हिजोको दिनमा भलादमी कहलिएका मेयर बिजय सरावगीलाई बिस्तारै राजनीतिको हावाले छुन थालेको पुष्टि हुन थालेको छ । को आफ्नो–को पराया बीचको अन्तर छुट्याउन उनलाई गाह्रो भएको छ ।
एक हजार मोतियाबिन्दुको अप्रेशनको लागि विदेशी दातृ निकाय हेल्प वायर हेल्फीन नामक संस्थाले ५० हजार युरो सहयोग गर्‍यो । जस अनुसार एक हजार बिरामी मध्ये प्रत्येकको भागमा रु. ६ हजार ३ सय रुपैया पर्दछ । अहिले जुन मोतियाबिन्दु पीडित बिरामीहरुको शल्यक्रिया गरिएको हो त्यसको सम्पूर्ण खर्च हेल्प वायर हेल्फिन नामको संस्थाले माट्रिका आई सेन्टरसंग गरेर व्यवस्थापन गरेको हो ।
जब घरबाट आउने देखि घर जानेसम्म अप्रेशन भएपछि चश्मा औषधी लगायत सम्पूर्ण खर्च दातृ संस्थाले व्यहोरेको छ, त्यसमा मेयर कल्याणकारी कोषको नाम झुण्डयाएर पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ पर्ने गाउँ र अधिकांश वडाहरुलाई लक्षित गरेर यो अप्रेशन शिविर चलाउने काम किन भयो ? यसको उत्तर सर्वसाधारणले खोज्न थालेका छन् । मेयर सरावगीका विरोधीहरुले आगामी दिनमा मेयर सरावगी पर्सा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्ने तयारीमा लागेकाले उनी र उनको भजन मण्डलीले व्यापक जनसमर्थन जुटाउन यो शिविरको सहारा लिएको बताएका छन् ।
मेयर सरावगीको भजन मण्डलीले माट्रिका आई फाउण्डेशनको साठी प्रतिशत र वीरगंज महानगरपालिकाको तर्फबाट चालिस प्रतिशत खर्च भएको भ्रमपूर्ण समाचार उनको सचिवालयबाट प्रवाहित गरेर उल्टो मेयर सरावगीलाई ना·ो बनाएको पुष्टि अरु कसैले नभई वीरगंज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख अरुण महतोले गरेका छन् ।
उनले यो शिविर कसले कहाँबाट सञ्चालन गरेको हो त्यो आफुलाई थाहा नभएको र वीरगंज महानगरपालिका र माट्रिका आई फाउण्डेशनसंग कुनै किसिमको अधिकारिक सम्झौता नभएको बताउनु भयो । महतोले आफु स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख भएतापनि कुनै शिविरमा नगएको तर मेयरले आफ्नो कल्याणकारी कोषबाट केही रकम खर्च गरेको आफुले सुनेको बताउनु भयो । पर्सा जिल्लाका पीडित मोतियाबिन्दुका बिरामीहरुले सेवा सुविधा पाउनु राम्रो कुरा भएतापनि पीडितहरुको नाउँ भजाएर नाम र दाम कमाउनु जायज काम नभएकोमा सबै एकमत देखिएका छन् ।
कुनै बेला नेपाल देशका राजा ज्ञानेन्द्र कहलिन्थे । अहिले उनी भुपु राजा भएका छन् । अहिले राजा ज्ञानेन्द्रका शुभचिन्तकहरु भन्छन सल्लाहकारहरु नराम्रा भएका कारण यो दिन देख्नु परेको हो । मेयर सरावगीको नियति यस्तो नहोस् भनेर उनका शुभचिन्तकहरु मनाउने गरेको छन् ।